विमानस्थल प्रमुख भन्छन् ‘यसरी निभायौं आगो’ (भिडियो वार्ता) - Enepalese.com
विमानस्थल प्रमुख भन्छन् ‘यसरी निभायौं आगो’ (भिडियो वार्ता)
इनेप्लिज २०७४ फागुन २९ गते २१:३३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । विमान दुर्घटनाको विषयलाई लिएर केही विवादहरु सतहमा आएका छन् । कसरी भयो, दुर्घटना ? कसरी निभाइयो, आगो ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीसँग केन्द्रबिन्दु संवाददाता अदिती पौडेल र क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र रायमाझीले गरेको भिडियो वार्ता –